Iine tembiricha yakakwira, kurwisa ngura, kupfeka kuramba, thermalshock, yakaderera density uye kuomarara kwakanyanya kweanoshamisa mashandiro eiyo newceramic zvinhu, zvinonyanya kushandiswa mune yakanyanya tembiricha, oxidation uye avhiyesheni aerospace uye mamwe minda.
Molecular fomula HFN
CAS Nhamba 25817-87-2
Unhu hupfu hwakatsvukuruka
Nzvimbo yakanyunguduka 3310'C
Kuwandisa 13.2 g / cm3
Zvishandiso Iine tembiricha yakakwira, kurwisa ngura, kupfeka kuramba, thermashock, yakaderera density uye kuomarara kwakanyanya kweanoshamisa mashandiro eiyo newceramic zvinhu, zvinonyanya kushandiswa mune yakanyanya tembiricha, oxidation uye aviationaerospace uye mamwe minda.
Zvivakwa: pfumbu pfumbu, cubic crystal chimiro. Nzvimbo yakanyunguduka 3310 ℃, microhardness 16GPa. Yakagadzikana kwazvo, asi iri nyore kune aqua regia, yakadzika sulfuric acid, hydrofluoric acid ngura. Yakachena kuchena, diki chidimbu saizi, yunifomu kugovera, hombe yakatarwa nzvimbo nzvimbo, yakakwira nzvimbo chiitiko, grey hupfu, cubic kristaro chimiro. Microhardness 16GPa.
Yakagadzirwa nekuita kwakanangana kwehafnium uye nitrogen pa 900 ℃, kana neyakaitika yehafnium halides uye ammonia kana musanganiswa weNitrogen uye hydrogen. Hafnium alloy chinhu chakakosha chechinhu chinopesana.
Hafnium nitride ine yakanakisa mehendi, magetsi, optical, yakanyanya tembiricha uye ngura yekudzivirira hunhu, uye ine yakakosha mashandisirwo mumunda wekugadzira michina uye microelectronics. Hafnium nitride nanometer inogona kushandiswa zvakanyanya mu semiconductor, photoelectric uye machining minda. Nekuda kwekubatanidzwa kwemhando dzakasiyana dzeakanaka michina, kupisa, kupisa uye ngura kupfeka kusagadzikana maitiro, iyo hafnium nitride nanometer firimu inotarisirwa kuve rinoshanda rinogadzira hwindo rekudzivirira-kuratidza kuratidzwa kwekudzivirira zvinhu, inogona kushandiswa mune aerospace kiyi Optical zvishandiso. HfN rudzi rutsva rwezvinhu zvakaoma zvine hunyoro hwakanyanya, kuomarara kwakanyanya, kupfeka kuramba uye kusagadzikana kweiyo oxidation. Inogona kushandiswa senzira yekudzivirira yehunyanzvi uye yekushongedza minda, abrasion inodzivirira yekunze firimu yekucheka maturusi, kemikari inert firimu uye yakanyanya tembiricha inodzivirira inodzivirira firimu.
Pashure: Iron Simbi, FeB
Zvadaro: Titanium Nitride Upfu, TiN
Hafnium nitride upfu
Hafnium nitride upfu Mafekitori
Hafnium nitride upfu Fekitori
Hafnium nitride powder Mugadziri
Hafnium nitride powder Vagadziri
Hafnium nitride upfu Mutengo
Hafnium nitride upfu Quotes
yakachena Hafnium Nitride Powder